हामीलाई थाहा छ ग्राहकहरू हाम्रो बारेमा कुरा गर्दैछन् ... | Martech Zone
हामीलाई थाहा छ ग्राहकहरू हाम्रो बारेमा कुरा गर्दैछन् ...
आइतवार, सेप्टेम्बर 6, 2009 शुक्रबार, जनवरी 6, 2017 Douglas Karr
हिजो, मलाई क्लिन्ट पृष्ठ साक्षात्कार को खुशी थियो, सीईओ डट्सटर, सोशल मिडियामा लगानी फिर्ता। म ots बर्षको लागि डोटस्टरको प्रशंसक हुँ र यो सपनाको बारेमा सुन्दा कम्पनीको लागि मेरो मूल्यांकन पुनः पुष्टि भयो। सेवाका सर्तहरू जुन अन्य रजिस्ट्रारहरू छन् उनीहरुका ग्राहकहरु लाई लाभान्वित थिए।
२०० social सामाजिक मिडिया को वर्ष हो Dotster को लागी। डोटस्टरले एक सामाजिक मिडिया टोली विस्तार र भाडामा लिएको छ र परिणामहरू पहिले नै असाधारण भएको छ। डट्स्टरले मापन गर्न पद्धति विकास गर्न पनि सकेको छ लगानी फिर्ता यसको प्रयासको लागि। कम्पनीले हेरिरहेको छ नयाँ ग्राहकहरुको अधिग्रहणमा वृद्धि, प्राप्त गर्दै ग्राहकहरूको धारणा, र पनि ग्राहक सेवा लागत घटाउँदै.
"हामीलाई थाहा छ ग्राहकहरू हाम्रो बारेमा कुरा गरिरहेका छन् ... र हामी ती कुराकानीहरूको हिस्सा बन्न चाहन्थ्यौं", क्लिन्ट भने।
ट्विटर यो कहाँ छ!
डटस्टरले धेरै कुराकानी र अवसरमा हेरिरहेको छ twitter। कुराकानीहरू मुख्य रूपले ग्राहक सेवा मुद्दाहरूको केन्द्रमा छन् - त्यसैले डट्सले दुबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्षम भयो र उनीहरूको उत्पादन र सेवाहरू सुधार गर्न ग्राहक ईनपुटलाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
त्यहाँ केहि बढ्दो दु: खहरू छन्, तर क्लिन्टले भने कि सोशल मिडियाको सब भन्दा ठूलो अनुभव भनेको ग्राहकहरुलाई ग्राहक वकिलहरुमा परिवर्तन भएको देखेको छ। डोटस्टरले फेला पारे कि तिनीहरूका ग्राहकहरूले उनीहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छन किनकि यसले कम्पनीलाई मात्र सुधार गर्दैन, तर अन्तमा यसले ग्राहकलाई पनि मद्दत गर्दछ। कहिलेकाँही, सोशल मिडिया टोलीले ग्राहकहरूलाई चकित पारेको छ - ती ग्राहकहरूले सोचेका थिएनन् कि कसैले यस्तो ठूलो कम्पनीबाट व्यक्तिगत रूपमा कोही मानिसकहाँ जान्छ।
ग्राहकहरु संग संलग्न काम गरीरहेको छ। कम्पनीले यसको मूल्य वर्धित सेवाहरू बढाइरहेको छ ... यति धेरै कि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि यसले उनीहरूको डोमेन रेजिष्ट्रेसन सेवाहरूलाई उछिन्न सक्छ। थप सेवाहरूले ग्राहकहरूको सेवाहरू थप्दै ग्राहकको मंथन घटाएको छ जुन ग्राहकहरूले अरू कहिँ पाउनुपर्दछ तर डट्स्टरको उत्पादनहरू र सेवाहरूको सूट मार्फत प्राप्त गर्न सक्दछन्।
क्लिन्ट भन्छन् कि कम्पनी "Dotster प्रयोगकर्ता समुदाय को सामूहिक बुद्धिमत्ता दोहन" मा सक्षम छ।
डट्सटर प्रयोगकर्ता समुदायलाई सदुपयोग गर्दै
डट्सटर नेक्स्ट बिग सानो साना व्यवसाय भनिन्छ एक महान भिडियो अभियानको साथ, हालसालै सोशल मिडियाको यसको प्रयोग विस्तार गरिएको छ। प्रतियोगिताले ग्राहकहरूलाई २ मिनेटको भिडियो अपलोड गर्न आवश्यक गर्दछ उनीहरूको व्यवसायको बारेमा र उनीहरूको डॉट्स प्रयोगको बारेमा। ठूलो प्रेसको साथसाथै, महान पुरस्कार विजेताले $ १,००० प्राप्त गर्‍यो र दोस्रो पुरस्कार $०० थियो। तेस्रो पुरस्कार एक सम्मानजनक उल्लेख थियो त्यसपछि21,000 अर्को २० व्यवसायको लागि। यदि तपाईं यी सबै थप्नुहुन्छ भने, डटस्टर $ २500०० को लागि स all्कलन गरिएका सबै महान कथाहरूको बारेमा सोच्नुहोस्! खराब छैन!
यहाँ विजेता थियो, बाइक टायर प्रत्यक्ष:
डोट्टर स्वीकार्छन् कि तिनीहरू सोशल मिडियामा विशेषज्ञ छैनन् - केहि गल्तीहरू बाटोमा गरिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त ती ती हुन् विश्वासीहरूलाई सामाजिक मिडिया मा! ग्राहकहरू डटस्टरलाई चीजहरू ठीक गर्न सोधिरहेका छन्, र यदि उनीहरूले छिटो जवाफ दिए र प्रतिक्रिया सुन्नुभयो भने तिनीहरू सफल हुनेछन्। यदि तिनीहरू गर्दैनन् भने, तिनीहरूले क्लिन्टलाई कल गर्ने बनाउँदछन् जानकारी शून्य - बाँकी ठाँउमा कसैले भर्नेछ!
दैनिक सामाजिक मीडिया ड्यासबोर्ड
क्लिन्टले एक सोशल मिडिया ड्यासबोर्ड प्राप्त गर्दछ जुन उसले दैनिक आधारमा समीक्षा गर्दछ। रिपोर्टले नकारात्मक टिप्पणी, सकारात्मक टिप्पणीहरू, र उद्योग समाचार संकलित गर्दछ। मलाई लाग्छ कि यो रोचक छ कि एक सीईओले सुनिश्चित गर्नेछ कि उसको कम्पनीको सामाजिक मिडिया स्वास्थ्य निगरानी प्रत्येक दिनको एक आवश्यक हिस्सा हो। यो एक ड्यासबोर्ड हुन सक्छ जुन तपाईंको कम्पनीले कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ!
डट्स्टर डोमेन रजिस्ट्रारबाट केहि विकसित भएको छ - होस्टि companies, साइट डिजाइन, विकास र सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूलाई। डट्स्टरले डट्स्टर जडान पनि सुरू गर्यो कम्पनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै सामाजिक नेटवर्कहरू विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन। उनीहरूले लगानीमा सामाजिक मिडिया फिर्ताको हिसाब गर्नमा एक उत्तम ह्वाइटपेपर पनि लेखेका छन्।
सामाजिक मिडियाको लगानी कहाँ छ?
डटस्टरले सोशल मिडियामा लगानीमा फिर्ताको लागि धेरै अवसरहरू औंल्याउँछ। ब्रान्डि and र प्रचारहरूको सम्बन्धमा:
मार्केटिंग खर्च घटाउँदै
ग्राहक अधिग्रहण लागत घटाउनुहोस्
ब्रान्ड प्रतिष्ठा सुधार गर्नुहोस्
तिनीहरू पनि ग्राहक सेवा मा एक प्रत्यक्ष रिटर्न देख्न:
कल सेन्टर लागत कम गर्नुहोस्
ग्राहक प्रतिक्रिया समय सुधार गर्नुहोस्
शोध लागत घटाउनुहोस्
र डोटस्टरले कर्पोरेसनहरूलाई आन्तरिक रूपमा सामाजिक मिडिया प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दछ, सामाजिक मिडिया लीभरेस हुँदा केही प्रतिफलहरू हुन्छन् ... केही उदाहरणहरू:
मद्दत डेस्क ओभरहेड घटाउनुहोस्
कम प्रशिक्षण र यात्रा खर्च
सबै भन्दा राम्रो, Dotster ले ग्राहक वफादारी को सम्बन्ध मा लगानी मा एक फिर्ताको मापन गर्न सक्छन्:
ग्राहक प्रतिधारण सुधार गर्नुहोस्
अनुसन्धान / मार्केटिंग लागत घटाउनुहोस्
कम भर्ती लागतहरू
प्रयोगकर्ता समुदायहरू र डट्स्टर जडानमा अधिक जानकारीको लागि, डट्सटर जडान वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् वा -360 449-5900--15-XNUMX-XNUMX०० मा कल गर्नुहोस्। म सफल समुदायको लागि डट्सरको १ tips सल्लाहहरू पनि सिफारिस गर्दछु!
बाट फोटो पोर्टलैंड बिजनेस जर्नलको डटस्टरमा लेख.
टैग: बाइक टायर प्रत्यक्षक्लिन्ट पृष्ठप्रतियोगिताडट्सटरसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया प्रतिस्पर्धाशहादतयूट्यूब प्रतियोगिता